Etu esi ezipu foto na WhatsApp n'enweghị ezigbo ihe | Gam akporosis
Edere Ferreno | | Emelitere na 02/09/2019 09:32 | Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
Otu omume anyị na-arụkarị na WhatsApp bụ izipu foto, nke bụ otu n'ime ihe kpatara ya chats weghara ọtụtụ ohere. Ọ bụ ezie na anyị na-enwekarị nsogbu mgbe anyị na-eziga foto. Ebe ọ bụ na n'ọtụtụ ọnọdụ enwere ọnwụ nke ụdị foto dị otú ahụ, n'ihi na ha na-adịkarị obere karịa foto mbụ.
Luckily, anyị nwere ụzọ iji zipu foto na WhatsApp na-enweghị ọnwụ nke ogo ma ọ bụ mkpakọ jiri ya tụnyere nke mbụ. Nke a bụ aghụghọ dị mfe nke ga - enyere anyị aka iji ngwa izi ozi na-ewu ewu na gam akporo.
Ihe nkịtị bụ na mgbe anyị zipụrụ foto na ngwa izipu ozi, nha ya na mkpebi ya na-ebelata. Echere na ogo ya belatara 50%, na ọnwụ ma ọ bụ mbelata nsonaazụ ya. Mana otutu mgbe anyi choro mmadu ka inwe foto nke mbu ya na udiri ya na mbu. Enwere ike imezu ya n'oge ọ bụla.
1 Zipu foto na WhatsApp n'enweghị ezigbo ọnwụ
2 Gịnị kpatara aghụghọ a ji arụ ọrụ?
Zipu foto na WhatsApp n'enweghị ezigbo ọnwụ
Nke a bụ ihe anyị nwere ike ime na nkata ọ bụla na ngwa ahụ, na-eziga foto anyị nwere na gallery ahụ na ama anyị. Ọ bụ aghụghọ anyị nwere ike iji na WhatsApp, anyị achọghị ngwaọrụ nke atọ iji mee nke a. Anyị nwere ike izipu foto ọ bụla, ọ bụrụhaala na ọ gafere oke ibu enyere na ngwa ahụ, na-enweghị ọnwụ ọ bụla na ya.
Anyị ga-emeghe WhatsApp wee banye nkata nke anyị chọrọ iziga oyiyi ahụ. N'ime nkata a, anyị na-aga ebe a na - ezipụ ozi, ebe anyị na - ede ihe ọ bụla. N’ebe ahụ ka anyị pịa akara ngosi mkpachị akwụkwọ, nke bụ ihe anyị na-ejikarị eme mgbe anyị chọrọ iziga mmadụ faịlụ. Nọmalị anyị wee pịa gallery izipu foto ahụ, mana ugbu a, anyị na-eme ya n'ụzọ dị iche.
Ebe ọ bụ Oge a anyị ga-pịa nhọrọ nhọrọ akwụkwọ. Mpempe akwụkwọ faịlụ ahụ ga-emepe ma anyị ga-achọta foto anyị chọrọ iziga onye ahụ. Mgbe anyị chọtara ya, anyị na-ahọrọ ma ziga ya na mkparịta ụka a na-ekwu na ngwa ahụ yana iwu zuru oke, n'otu ụzọ ahụ anyị na-eme. Naanị ugbu a enweghị ọnwụ nke ogo na eserese a. Anyị na-eziga foto mbụ, nke mbụ ya na otu ibu ya. Dị mfe iji nweta, dị ka ị pụrụ ịhụ na nke a.
Etu ị ga - esi mara ugboro ole ka agaara ozi gị na WhatsApp
Gịnị kpatara aghụghọ a ji arụ ọrụ?
Aghụghọ a na - enyere anyị aka izipu foto ahụ na WhatsApp n’agbanweghị ogo ya. Ọ na-arụ ọrụ n'ihi na usoro a anaghị ezipụ foto dị ka a ga - asị na ọ bụ onyogho, nke bụ otu anyị si eme ya. Ihe anyị na-eziga bụ kwuru foto dị ka a ga - asị na ọ bụ faịlụ ma ọ bụ akwụkwọ. Ọ bụ nnukwu ihe dị iche na nke a.
Will ga-achọpụta ya, n'ihi na mgbe anyị zipụrụ foto a, ọ dịghị obere nke ya dị ka ọ na-adịkarị. Kama nke ahụ, a na-eziga ya n'otu ụzọ ahụ ka anyị nwere ike izipu akwụkwọ (dịka PDF ma ọ bụ Okwu) na WhatsApp. Nke a bụ ihe na-enye onye nke ọzọ ohere ibudata foto nke mbụ, na nha na mkpebi ya. Yabụ na ọ bụ nhọrọ nke nnukwu mmasị na nke a. E wezụga na ọ dị mfe. Yabụ ọ bụ nhọrọ kachasị mma anyị nwere ugbu a.
Anyị nwere ike izipu foto niile anyị chọrọ n'echiche a, ọ bụrụhaala na ibu kachasị gị akarịghị nke WhatsApp guzobere na ụkpụrụ ya. Ihe kachasị mma bụ n'ọtụtụ ọnọdụ iji zipu foto n'otu n'otu. Ọ bụ ezie na izipu foto abụọ n'otu oge, na-eji usoro a, apụtaghị na a ga-enwe ọnwụ nke mma na ha. N'ihi ya, ị na-agaghị na-ewere ihe ọ bụla n'ihe ize ndụ mgbe ị na-eji ya na gị gam akporo ekwentị. You nwetụla mgbe a nwaa aghụghọ a? Ọ baara m uru?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Ndị aghụghọ » Etu esi eziga foto na WhatsApp n'enweghị ezigbo ọnwụ
Huawei Mate 30 enweela ụbọchị ngosi ngosi
Setịpụ ụkwụ gị ma chọta ụzọ onye ị hụrụ n’anya ga-esi gaa Stretchy Legs